Afuuffiin Madaa Hin Fayyisu – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooAfuuffiin Madaa Hin Fayyisu
Damee Boruu: 4/24/2018
File Bishooftu Irreecha 2017: Qeerroo at a year anniversary of the mass massacre of their friends at Lake Arsadi on October 2, 2016
Mootonni Habashaa uummata garboofachaa jiran malaamaltummaa adda addaan bara baraan gowwoomsuuf tattaaffii gochaa jiran hubachuun rakkisaa miti. Bara Dargii “nama kan nama godhe hojii” kan jedhu imaamata komunistota ture. Imaamatni TPLF immoo sobuu, waliin dha’uu , fakkeessuu, gowoomsuu fi doorsisuu irratti kan hundeefame. Yoo toftaan kun hin hojjenne tumuu, waxaluu, gudeeduu, hidhuu, achi buutee balleessuu fi ajjeessuu dha. Yoo kun hunduu dhimaa baasuuf dide sodaachisuuf jecha jumulaan lafa irraa haxxaa’uu dha.
Imaamatni TPLF kun ija keenya duratti ifatti deemaa waan jiruuf raga barbaachaa hin rakkanu. Garuu raga jiru lakkoofinnee tareessuuf yaroo fi bakka hin qabnu. Utuu fagoo hin deemiin duraa cubbuu TPLF Uummata Oromoo burjaajessuuf waggaa 25 darban kana keessatti qopheesattee as baaftee kaasuun barbaada. Utuun waanan hubadhee kana hin kaasiin dura namoonni kitaaba (Animal Farm by George Orwel, 17August 1945) hin dubfinne dubbisuuf ayyaana argatanii natti tola. Kitaaba kana keessatti Napoolyoon buchuloota ykn ilmaan sarootaa utuu isaan homaa hin bariin qofaatii guddifatee humna tikee godhate. Warri kun waan Napoolyoon jedhe irraa kan hafe waan biraa hin beekan. Ofii waan barbaadan ni argatuu. Hojiin isaanii Napoolyoon tiksuu fi waan Napoolyooniin mormuu hundaa mancaasuu dha.
Malas Zeenawii ijoollee dhalootan Oromoo tahanii karaa irratti gudachaa turan funaanee akka saroota Napoolyoon Uummata Oromoo irratti guddifate. Har’a TPLF kan ofii ishee hojjechuu dadhabde itti darbee kan Uummata Oromoo lafa irraa haxxaa’ee fixaa jiru saroota TPLF guddifate akka tahe namni hin galleef hin jiru. Oromoo keessa ayyaan-ilallattota baayyeetu jiru. Isaan waan deemaa jiru kana arguu fi dhaga’uuf fedhii waan hin qabaneef irra ilaaluu hin qabnu.
Buchuloota TPLF guddifatee hojii irratti boba’anii keessaa warra fuula dura jiran Obbo Lammaa Magarsaa nama Oromoonni tokko tokko faarsaa jiranii fi Dr. Abiyi Ahamed nama Habashoonni mataa irratti baachaa jiran kaasuun fedha. TPLF ilmaan Oromoo tumuun, waxxaluun, gudeeduun, hidhuun, ajjeessuun fi doorsisuun akka duubatti deebisuu hin dandeenye bareechitee agartee jirti. Kan hafe tooftaa sobaa fi fakkeessuu qofa. Kana gochuu immoo saroota ishee soortee of fakkeessitee guddifate of dura qabdee duubaan dhiibuu tooftaa bara kanaa godhatee jirtu dha.
“Afaan gaariin afaa gaarii caala”, jedha Oromoon. Obbo Lammaan afaan damaan make yaroo dubbatuu uummata amma tokko burjaajesuun ni mala. Garuu dhugaa isaa yoo ilaallee uummatni Oromoo badii, dhumaatii fi salphina prezedaantii Lamma jalatti irra gahee walii gala prezedaantota Oromoo warra jedhaman jalatti irra hin geenye. Mee dhumaatii kan jumulaa haa kaafnu. Dhumaatii Irrechaa Haroo Arsdee, Dhumaatii Calanqoo Lamaffaa, Dhumaatii Hammarreessa, fi Dhumaatii Moyaalee qalbiin haa ilaallu. Prezedaantii Oromoo isa kam jalatti Oromoon amma kana jumulaan kan dhume? Tokko tokko dhumaatii kanaaf (Mass Massacre) yaroo tahetti waanan barreessee jiruuf irra deebi’uun barbaachisaa miti.
Oromoota guyyaa guyyaan ajjeefaman, hidhaman ykn achi buuteen isaanii hin argmne manni isaanii qofti haa lakka’u. Prezedantii Oromoo isa kam jalatti ilmaan Oromoo miliyoona tokkoo ol tahanii qee’ee isaanii irraa buqa’aanii biyya abbaa isaanii keessatti kadhatuu tahanii kan karaa irratti hafan? Prezedantii Oromoo isa kam jalatti Uummatni Oromoo Kuma kudhanii ol tahu biyya abbaa isaa irraa qawween buqqasamee biyya Keeniyaa keessatti baqatuu kan tahe? Kana hundaaf eenyu kan itti gaafatamu prezedanti Lammaa irraa kan hafe?
“Drama Hollywood” kan caalu TPLF Uummata Oromoo irratti hojjechaa jirti. Namni hanga tokko Dr. Abiyi Uummata Oromoof jijjirama ni fida jedhanii nu raatessuu yaalu. Dr. Abiyi nama Oromoo tahuu isaa iyyuu waaakkatu Oromoon miga isaa gaafachuun akka of xiqqeesseti dubbata. Namni kun haalan bareechee ayyaan –ilaallatuu dha. Kan har’a isa kosii keessaa kaase achiin isa gahe dhiiga ilmaan Oromoo akka lola gannaa bilisummaa Uummata Oromoof dangala’e. Dandeetii fi beekumsaa qabuuf yoo Mumicha Ministeeraa taheen jira jedhee yaadaa jiraate gowwummaa gudhaa dha. Warri achi isa kaa’an akka Uummata Oromoo burjaajesse qabsoo bilisummaa Oromoo dhaamsuuf akka tahe qabsawwaan Oromoo bareechine hubanna. Yoo hojii kennameef kana bakkaan hin gahuu taheTPLFis achi isa hin keessu.
Amam iyyuu aarsaa nu haa fudhatu malee Uummatni Oromoo hojii ilmaan yaasaa OPDO kana hubatee guyyaan of irraa darbu fagoo hin jiru. “Afuuffiin Madaa Hin Fayyisu “, akkuma jedhan hidhaa fi hisiisaa, ajjeessaa fi ajjeesisa, jumulaan lafa irraa dugugaa ,si jaalanna fi siif dhaabbanna jechuun wal hin fakkaatu. Amma uummatni dammaqee irratti ka’uu abdii sobaan uummata gowwoomsu haa yaalan. “Karaan Sobaan Irra Darban Irra Deebi’uuf ‘” akka nama dhibuus beekuu qabu.
Yaroo gabaaba kana keessatti Dr. Abiyi, Jijjigaa, Amboo, Maqalee, Gonder fi Bahir Dar deemuun waan barreessanii itti Kenan dubbisee yaroo fixu gaaffii ka’uuf deebiin keennu wan wal faalluu fi waan kijiba irratti hunda’e akka tahe hubachuuf wal gahii isaa hordofuun ni gaha. Namni kun rakkina Impaayeera Itoophiyaa hiiku utuu hin taane nama biyya sana irratti beenzina facaasee ibida itti kaa’uu deemu. Tuffiin Uummata Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoof qabuu waan nama gadisiisu illee yoo tahu burqaan isaa akkaataa TPLF itti leenjifte irraa madda.
Uummatni Oromo waan hundaa dura ijaarsi OPDO meeshaa TPLF akka taate bareechee beeka. Sarootni TPLF kunis akka isaaf hin dhaabbanne dagachaa jiru. Dhuumatii, dararaa fi cinqii isa irra jiru kanaaf duraan itti gaafatamuu kan qabu warra siif jirra jedhee isa fixaa fi ficissiisaa jiru kana akka tahe ni hubata. Kanaafuu walii gala yaroo kennuuf dhiifnee waan qabnu maraan WBO fi QBO cinaa hirira gallee qabsoo bilisummaa qarroon qarree fi qeerroon Oromoo kumaatamaan dhiiga itti lolaasan akka fiixaan bahuu gochuun dirqama keenya!
SBO Sagalee Bilisummaa Oromo, Ebla 24, 2018
Galatoomi Damee Boruu!
Akkas kunoo dubbiin. Hattuun gandaa ka wayyaaneen ijoollumaa kaaftee ideology isheetiin sobaan guutttee guddifte, qabsoon Bilisummaa Oromoo injifannoo cululuqaa galmeessise jalaan ulluuqxee kan Wayyaanee waliin galaan fincila diddaa gabrummaatiin nyaatamuu malte, kan galaana fincilaatiin liqimfamuu irraa hafuun isheeyyuu hin mirkanoofne, as deebitee abbaa fincilaa of taasiftee kaayyoo fincila Oromoof ka’umsa tahe, raacitii QBO kan tahe sabboonummaa Oromootti qoosuutti kaate! Hin qaanofnee fi wallaaltuu ta’uun ishee ammaan tana beekameera.
Doofaan barumsa sobaa ergamummaa Wayyaaneetiin warshaa Dhakaa Kotobee (Civil Service Colloge) irraa walitti harteen sobaan sadarkaa barumsaa Dr. badhaafamtee waa’ee sobboontummaa Oromooyyuu hin beektu! Waan ummati habashaa /Goojjaam ykn Gondar fincilee asiin ishee gahe itti fakkaatee fayyaa albaati! Sabboonummaa Oromoos beekumsa ishiin ala xiinxalti.
Namittin Abiyyi jedhan kun bakka MM amma kennameef kanayyuu waan dhuguma kennameef se’ee kan amane hin fakkaatu. Ammayyuu dhuguma MM ta’uu isaa hin mirkaneeffatin jira. haasaa inni taasisaa jiru akka nama reef abjuu keessaa kaheeti. Madaallii hundaan nama sadarkaa kanatti dirqami itti kennamu hin fakkaatu.
Warreen faltii akkasii qabsoodhuma FXG tu Wayyaanee wajjin dhabamsiisuu qaba!